Ama-Wifi Kits, Amakhamera we-Wifi, Amakhamera Webhethri - I-Aopvision
"imakethe kuqala, ikhasimende kuqala", okugxile ezimakethe kanye nokufunwa kwamakhasimende njengomqondo wokulawulwa okuyisisekelo.Besisebenza kanzima sihlanganisa umkhiqizo njalo futhi sithuthukisa insizakalo yethu. Besilokhu sinani njalo.
Sikuphathele ISO2008 International Quality Certificate kanye ISO14001 International Environment Management Certificate; ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu yochungechunge ivunyelwe ngezitifiketi ze-RoHS, CE ne-FCC
1-Panasonic kusengaphambili i-NPM SMT Line, i-Speed ​​Speed, kanye ne-Yamaha SMT LINE 2-Set-High-Temperature Auto Air-Flowing 3-Line Assembly Line Line 4-Group R & D team of abput 50 person Monthly Qty Capity: 200K of Camera, 30K-50K ye-DVR / NVR
I-Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd yasungulwa ngo-2006, igxile ku-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa embonini yezokuphepha. Sinikela ngayo yonke imikhiqizo ye-CCTV yamakhasimende emhlabeni wonke, kufaka phakathi i-Smart Face Detections / Face IDH.265 NVR range, i-Smart IP Camera, i-Smart 5 IN 1 XVR, amakhamera we-HD asebenza kahle futhi asebenza kahle, ama-WiFi Cameras nama-WiFi NVR Kits, 4G / Wifi Solar Camera . Njengomunye wabakhiqizi abahamba phambili eChina, i-Aopvision inikelwe ukuhlinzeka ngobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme, umkhiqizo wekhwalithi, kanye nensizakalo yobungcweti.